Otu akwa akwa mmiri na-agbatị | Rayson
Ndị otu azụmaahịa na-atụ aro ka ha yie mmejuputa iwu ruo mgbe May 200 gachara, ma ọ bụ iji chepụta ahụ na-adịghị anya n'oge na-adịghị anya. The European Commission jụrụ mkpa ọ dị maka atụmatụ mberede wee kwuo na ọ ga-elekwasị anya na usoro mmejuputa iwu ahụ, nke gụnyere chọrọ ndị na-emepụta ihe iji nyochaa nchekwa ngwaahịa mgbe ọ bụla ngwa ọrụ na-aga n'ihu ọha.
Ihe eji eme ngwa ngwa mezuru site na ihe eji eme ihe eji eme ihe na-agbagharị na mbara igwe nke na-agbagharị na elu rpmspeed, na-eke ihe eji eme ihe eji eme ihe. Maduire Ngwaahịa Co., LTD. Lee ihe dị omimi, inye nri. Marion minerpaddadgers ma ọ bụ na-enweghị ike na-enye nnukwu ihe ma ọ bụ ịgwakọta nri akọrọ ma ọ bụ ntụ ntụ, apịtị, ma ọ bụ tapawa sie ike. Mgbaka siri ike n'etiti igwekota na tank ahụ na-ahụ maka mwepu zuru oke. Na-atụfu igwe na-apụta.
Osimiri artificus akpọ oku. \_ "Na njedebe, ndị mmadụ chọkwara ịmepụta ebe a na-eme ihe dị iche na-enye ndị ọbịa ihe dị iche karịa ndị na-adọba mmiri mmiri na ndị umengwụ Peter Dylethe Peter na ebe a na-adọba ụgbọala. \_ "Nsonaazụ ahụ bụ 2. 3-gbọsị njem osimiri km n'ime ya na nde 15 nde nke mmiri dị ọhụrụ